Ntụle Semalt: Ngwa nchịkọta Data Weebụ nke Weebụ Nwere Ike Inyere Gị Aka
Anyị maara na nchịkọta weebụ bụ ihe mgbagwoju anya Usoro nke na-agụnye ịchọta na iwepụta ozi sitere na weebụsaịtị dị iche iche. Imirikiti azụmahịa na-adabere na data, na ngwá ọrụ weebụ nchịkọta dị mfe nwere ike dozie nsogbu dị iche iche nke data na-enye anyị ihe ndị dị omimi na nke bara uru.
Uru ntanetị nke ihe ntanetị weebụ na-adị mfe iji ma wepụ data ziri ezi n'ime sekọnd ole na ole. Ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị a bụ n'efu, ebe ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ. Ngwa ntanetị weebụ nwere ike ịdị iche site na ibe ha dabere na atụmatụ ha, nhọrọ ha, na ọrụ ha. Ụfọdụ n'ime ha na-achọ Koodu mgbe ndị ọzọ achọghị ka ị nwee nkà mmemme.
Ma ị na-achọ iwepụ data buru ibu ma ọ bụ mee ndokwa maka ọrụ ntanetị weebụ, Agenty ga-arụ ọtụtụ ọrụ maka gị. N'iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịmepụta ọrụ dị iche iche na-ekpuchi ihe n'otu oge ma wepụ ọtụtụ data. Ọ na-enye anyị nchịkọta scraped na usoro JSON, TSV na CSV ma na-eji API mee ka nchịkọta data na asụsụ mmemme ị họọrọ. Nbudata ya nwere oke ọnụọgụ nhọrọ, n'ihi ya ị nwere ike ị nweta nsụgharị akwụ ụgwọ nke na-enweta ego iji nweta ụgwọ.
CloudScrape bụ ihe nchọgharị weebụ nke ọzọ na-akwado nnukwu nchịkọta data ma ọ dịghị achọ nbudata ọ bụla.Ngwa a dabere na nyocha nwere ike ịmepụta ya ngwa ngwa ma wepụta data data oge gị. Ka oge na-aga, ịnwere ike ịchekwa data amịpụtara na Google Drive na Igbe. net ma ọ bụ na-ebupụ ya dị ka CSV na JSON.
Datahut bụ ngwá ọrụ ntinye ihe ntanetị nke kachasị mma, nke nwere ike ịmepụta, na nke ụlọ ọrụ-maka ihe niile ị chọrọ. Ị nwere ike ịnweta ezi ozi na ọnụahịa dị mma na nkwa 100% ego azụ. I kwesiri iburu n'uche na datahut enwereghi udi, ma uzo ya bu ugwo onodu ego ma kwadoro maka mmalite na ulo oru guzosiri ike. Ọ na-achịkọta data site na ọtụtụ saịtị wee nakọta ngwaahịa, ọdịnaya, ihe oyiyi, na profaịlụ gị.
Webhouse. ọ bụ ngwa weebụ nke na-enye nnweta kpọmkwem na mfe ịnweta data a haziri ahazi ma na-eji teknụzụ ntanetị weebụ arụ ọrụ dịgasị iche iche. Ọ nwere ikike ịdepụta ebe nrụọrụ gị ma wepụ data sitere na ibe weebụ dị iche iche n'ihe karịrị asụsụ 200. Ọ na-akwado faịlụ RSS, JSON, HTML na XML.
6. Mmadụ ise
Otu n'ime ihe kachasị mma ngwaọrụ nchapu data bụ nke ise. Ọ bụ onye dị ike na nke a pụrụ ịdabere na ya na-echekwa ike na oge gị. N'oge oge, Fivetran nwere ike wepụta site na 100 ruo 100000 ibe weebụ n'enweghị ihe ọ bụla Source .